Shacabka iyo Dowladda Jabuuti oo difaac ka galay khatarta ururka Al-shabaab ee gobolka – Radio Daljir
Oktoobar 29, 2013 3:43 b 0
Jabuuti, October 29, 2013 – Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Jabuuti ayaa markii ugu horaysay degniin ka soo saartay khatarta ururka Al-shabaab ee gobolka barriga Afrika, xukuumada ayaa sheegtay in ay ururku damacsan yihiin in ay weeraro ka fuliyaan dalkaas.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Jabuuti Xasan Cumar Maxamed oo la hadlayey shacabka dalkaas waxaa uu sheegay in kooxda Al-shabaab ay qorshaynayaan in ay burburiyaan amniga iyo xasiloonida ka jirta dalka Jabuuti.
?Al-shabaab waxay halis geliyeen xasiloonida iyo kalsoonida caalamka ee Soomaaliya iyo Kenya iyo meelo kale oo ka mid ah gobolka, hadda waxay diyaar u yihiin in ay dalkeenna weeraraan.? Ayuu yiri mudane Xasan Cumar sheegay.
Mudane Xasan Cumar waxaa uu si cad u tilmaamay in ay heleen macluumaad muujinaya in ay ururku doonayaan in ay soo galaan dalka, oo ay diyaariyaan qorshayaal dagaal oo ka dhan ah shacabka iyo dowladda Jabuuti.
?Dowladda Jabuuti waxay diyaar u tahay in ay is difaacdo, waxaan ka dalbanaynaa shacabka reer Jabuuti in aysan soo dhowaysan ururka Al-shabaab dad ka tirsan soo sheega aan la dirirnee.?
Ururka Al-shabaab ayaa ku tilmaamay dalalka barriga Afrika kuw cadow ah oo dhibaato ku haya Soomaaliya, wararkii ugu dambeeyey ee kooxda Al-shabaab ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ay weeraro halis badan ka fulin doonaan inta badan dalalka gobolka.